आज कात्तिक ११ गतेः कसको राशिफल कस्तो छ? हेर्नुहोस् - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार ७ : १९
आज कात्तिक महिनाको ११ गते बिहीबार। सन् २०२१ अक्टोबर २८ तारिख। नेपाल संम्बत् ११४१ । दक्षिणयान । कार्तिक कृष्ण पक्ष । सत्तमी तिथी । आज कुन राशिको दिन कस्तो छ ? तल हेर्नुहोस
मेषराशि हुनेहरुले आज तनाव र क्रोधबाट टाढा रहनुहोला। अन्यथा धन हानि हुनुका साथै समस्यामा पर्न सक्छ। गलत र अनैतिक गतिविधिबाट पैसा कमाउने प्रयास नगर्नुहोला। नयाँ काममा आत्मबल बढ्नेछ। पुरानो काममा प्रगतिदेखिनेछ। मनोरन्जनमा रुचि जानेछ।
घरायसी बढी खर्च हुने्छ। व्यर्थमा समय जानेछ।साझेदारी काममा अरुले फाइदा पाउनेछन्।
व्यवसायमा आम्दामी हुनेछ। सोचेको कुरा पुग्नेछ।व्यवसायमा राम्रो प्रस्ताव आउनेछ।
आज तपाईको राशिमा चन्द्रमा छ। पैसाको हिसाबले आजको दिन तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण छ। पुँजी सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोला। भविष्यलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्न सकिन्छ। यसका लागि आज राम्रो अवसर पनि मिल्नेछ। राजनीतिक लाभ हुनेछ। काममा प्रशंसा मिल्नेछ। जागिरमा जिम्मेवारी थप हुनेछ।
वैदेशिक फाइदा हुनेछ। परोपकारमा ध्यान जानेछ ।सामाजिक काममा व्यस्तता बढ्नेछ।
पुँजीको अभावले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न बाधा पुग्न सक्छ। ऋणको स्थिति पनि आउन सक्छ। आफूलाई धैर्य राख्नुहोला। नयाँ लगानीको कार्य अधुरो हुने। अपजसको सामनागर्नु पर्नेछ। विसन्चोले वाधा गर्नेछ।
पारिवारिक यात्राको सुख मिल्नेछ। प्रेममा सम्वन्ध वृद्धिहुनेछ। प्रियजनले साथ दिनेछन्।
स्फुर्ति र जागर बढ्नेछ। खेलकुदमा रुचि जानेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ।
हाँसखेल र मनोरञ्जनको समय छ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो रहनेछ। आफन्तको सत्कार पाइनेछ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्छ। व्यवसायको सन्दर्भमा यात्रा हुनेछ। काममा साथीभाइको सहयोग जुट्नाले उत्साह मिल्नेछ। दिगो काम थाल्ने समय छ।
आज लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम पूरा हुनेछ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने वेला छ। वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाइनेछ। व्यापार बढ्न सक्छ। आज गरेको प्रयासले आम्दानीका स्रोतहरू विकास गर्न मद्दत गर्नेछ। आत्मविश्वास कायम रहनेछ। अरूलाई प्रभाव पार्न सफल हुनुहुनेछ। क्रोध र बोली दोषबाट बच्ने प्रयास गर्नुहोला। राशिफल जे जस्तो भएपनि तपाईंको दिन शुभ रहोस्।